Wararka - Suuqa korantada garaafku wuxuu sii wadi doonaa isbeddel kor u kaca ah.
Suuqa korantada garaafku wuxuu sii wadi doonaa isbeddel kor u kaca ah.
Inkasta oo suuqa koronto garaafka uu ku jiray wareejin lix bilood ah, haddana shirkadaha koronto-weyne ee garaafka ugu weyn wali waxay ku jiraan xaalad jabitaan sababo la xiriira kor u kaca waxyaabaha alaabta ceeriin. Marxaladdan, cadaadiska kharashka suuqa korantada garaafka ayaa caan ah, qiimaha korontorada garaafkuna wuxuu sii wadi doonaa isbeddel joogto ah oo kor u socda. Waxyaabaha saameynta gaarka ah leh waa sida soo socota:
1. Cadaadiska Qiimaha: Qalabka cayriin ee koronto-gacmeedka hadda jira si isdaba-joog ah ayaa loo hagaajiyaa, walxaha cayriin ee koronto-qabadkuna waa saliid-baaruud hooseeya, cirbadda coke. Qiimaha kalluunka loo yaqaan 'calcined coke iyo pitch' ayaa asal ahaan joogteeyay kor u kaca guud ahaan, iyo cadaadiska qiimaha ee suuqa elektroonigga garaafka ayaa si cad u sarreeya .. Cadaadiska hoostiisa, shirkadaha korantada garaafka ku shaqeeya waa inay kordhiyaan qiimaha si ay u ilaaliyaan dheelitirka lacagaha.
2.Supply waa dhagan yahay:
（1 companies Shirkadaha korantada ee loo yaqaan 'Graphite electrode' waxay leeyihiin xaalad sugitaan iyo-arag wax soo saar
（2 Bixinta kheyraadka barta qaar wey adag tahay.
（3 control Xakamaynta labada isticmaalka tamarta ee Gudaha Mongolia.
（1 Dabbaaldegga Guga ka dib, suuqa birta foornada qiiqa korontada ayaa weli ku jira heer aad u hooseeya. Makiinadaha birta qaar ka mid ah wali waxay leeyihiin keydad elektaroodro garaafyo ah oo aan la isticmaalin, warshadleyda birtuna waxay leeyihiin waxqabad dhexdhexaad ah oo ku saabsan iibsashada korantada garaafka.
） 2） Maadaama qiimaha alaabta ceeriin ee koronto garaafka ay wali kor u kacayso, oo ay ugu wacan tahay bixinta cufnaanta xoog-sareysa ee qeexitaannada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee suuqa korantada garaafka, suuqa hoose ayaa si tartiib tartiib ah u aqbalaya kororka joogtada ah ee garaafka qiimaha koronto.
（3） Suuqa dhoofinta korantada garaafka, xamuulka dhoofinta ayaa dhawaanahan aad u sarreeya, dhoofinta korantada koronto-dhaafkuna waxay ku xiran yihiin xaddidyo cayiman.
Aragtida Suuqa: Waqtigan xaadirka ah, xaalada jirta in isbedel wanaagsan uu ka jiro dhanka baahida loo qabo suuqa koronto garaafka, qiimaha korantada garaafyada ayaa si isdaba joog ah u kici doona maadaama qiimaha alaabta ceyriinku ay sare u kacayso sababtoo ah kororka joogtada ah ee kharashka.